Ardayda caafimaadka ahaan, waxaan la kulannay ka-fiirsasho maskaxeed oo ah hab kacsi, daqiiqad naftiisa, neefta, habka aan u daryeelno nafteena, si aan si wanaagsan u daryeelno kuwa kale. Waxaa taabtay nolosha, dhimashada, bini'aadamka, waar-la'aanta, shakiga, cabsida, guuldarada...Maanta haweenka, dhakhaatiirta, waxaan u gudbinay ardayda iyada oo wax barid ah.
Sababtoo ah daawadu way isbedelaysaa, ardayda maanta waxay noqon doonaan dhakhaatiir berrito. Sababtoo ah kobcinta dareenka daryeelka naftiisa, kuwa kale iyo aduunka waa lama huraan, kuliyada ayaa su'aalo iska leh.
MOOC-kan, waxaad ku ogaan doontaa dariiqan daryeelka ilaa fikirka, ama ka-fiirsashada ilaa daryeelka, iyadoo lagu salaynayo waayo-aragnimada ardayda caafimaadka.
Sidaa darteed, waxaan sahamin doonaa dhacdo ka dib
Sida loo daryeelo naftaada si aad u daryeesho dadka kale waqti caafimaadka dhimirka ee daryeelayaasha la weerarayo oo nidaamka isbitaal la gariirayo?
Sidee looga gudbi karaa dhaqanka faashadda oo loo guuro dhaqan daryeel oo daryeela kheyraadka nolosha?
Sidee loo kobciyaa dareenka daryeelka, gaar ahaan daawada, si gaar ah iyo si wadajir ah?
Meditation iyo daawada 2021: ammaanta daryeelka? Janaayo 17th, 2022Tranquillus
horeBaro inaad barato Cilmiga Dijital ah iyo Kumbuyuutarka
socdaSi fiican ugu isticmaal CCI iimaylka
Jadwalka fasaxyada guud ee 2022